Seyi tirikushandisa Map yeAfrica?
Tinofanira kubvuma kufanana kwemafungiro edu mashanu Sevanhu toshandisa semavambo edu, zvichibudikidza kufanana kwedu sevanhu.Chirongwa ichi chine tariro yekugadzirisa kuvhunduka kwakanyaya pamafungiro akatekeshera pamap ye Africa nekupera kwakaita Colonisation.
Pane nyika imwe neimwe panyika nhanhatu dziri pamachira emap ye Africa, Nyika makumi mana nesere hadzina kukwana padandemutambe iri kuti tiratidze kuti mipendero yenyika yapatsanura map yeAfrica. Nyangwe mipendero yenyika ichiti patsanura rupipiro rwehunyanzi rucharatidzwa pamap zvichanangana nekupa pfungwa yekuti unenge uri mumwe wemushandirapamwe unoratidza kufanana kwedu.
Tiri maAfrican,Tiri vanhu,hatisi tega.
Chii chinozoitika kana hunyanzvi hwebasa rako wagadzirwa?
Kana wagadzira mufananidzo wako unokwanisa Kuturika hunyanzvi hwebasa rako padandemutande zvakananga kuMusicPaint App uchishandisa bhatani “rekugovera”.
Zvichienderana nerondedzero yemafungiro ako, unyanzvi webasa rako uchapinzwa pane mamap enyika nhanhatu muChidimbu chekuGararai.
Wakasununguka kusarudza kana urikuda kuti zita rako ringe richiratidzwa pamwechete ne unyanzvi hwebasa rako, asi kuti unge uchikwikwidza zvinoda kuti utiratidze nyika yako mumutsara wedingindira mutsamba yepadandemutande. Kana usina kutizivisa nyika yako hatikwanise kuziva kuti unobva kunyika ipi saka hatikwanise kuisa chisikwa chemafungiro ako panzvimbo yakakodzera.
Zvichienderana nemafungiro aunenge wasarudza unenge uchikwanisa kuona imwe mifananidzo ichiratidza mafungiro aunenge wasarudza. zvinokanisa kana kusakwanisa kukukatyamadza.
Dzvanya pane masliders aripasi kuti ubatane neAfrican Garari Map